Geofumadas: AutoCAD र माइक्रोस्टेशन को 30 साल - Geofumadas
Geofumadas: 30 वर्ष AutoCAD र Microstation
अप्रिल, 2011 अटोक्याड-Autodesk, Microstation-बेन्टले
लगभग पछि पक्कै यति लामो समय विकासवादी इतिहास जीवित गर्ने केही हुन देखिन्छ जो यी दुई कार्यक्रम, को 30 वर्ष, म प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गामा केही देखाउन मुद्दा विचार गर्न समय लिएका छन्, हामी हामीलाई सम्झनुहोस् के भयो र हामी छोटो अवधिमा हामी के गर्न सक्छौं।
सामान्यतया, दुबै कार्यक्रमहरू एक समान टाइमलाइनमा छन् तर बिभिन्न बजार र विकास रणनीतिहरूको साथ। दुबै सहयोगी डिजाइनका लागि कार्यक्रमको रूपमा शुरू भए, त्यसपछि ती ठाडो रेखामा घुम्न थाले, हालको अवस्थामा अटोडेस्क यति लोकप्रिय भयो कि वास्तुकला र ईन्जिनियरि ofको क्षेत्रमा बजारको एक ठूलो हिस्सा लिन, अब मल्टिमेडिया संसार र निर्माणमा धेरै खोज्दै छ। । जबकि Bentley एक सानो क्षेत्र संग छोडियो, यसको ईन्जिनियरि,, आर्किटेक्चर र औद्योगिक प्लान्ट मा ठूलो कम्पनीहरु को दिशामा संग। यसको लागि, म बजारका केही सान्दर्भिक पक्षहरू समावेश गर्दछु जहाँ CATIA, Pro / IGENEER र UniGraphics जस्ता प्रोग्रामहरूको ठूलो सहभागिता छ यद्यपि हाम्रो वातावरणमा धेरै देखिने छैन।
Año अटोक्याड Microstation
Years बर्षको लागि AutoCAD ले व्यक्तिगत कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर महत्त्वपूर्ण फाइदा उठायो। बेन्टले तर्फ त्यहाँ बाहेक केही थिएन यसको पूर्ववर्ती ग्राफिक्सका लागि टर्मिनलसँग जोडिएको मुख्य फ्रेम्स वा मिनी कम्प्युटरहरूमा उच्च टेक्नोलोजीको साथ इन्टरग्राफ।
1979 मा, IGES मानक सिर्जना गरिएको छ.
1980 स्वतः सीएड 1.0 संस्करण
यो माइक्रोकेड प्रोग्रामबाट जन्मेको थियो, त्यसपछि यसलाई साक्षात्कार (१ 1978 9900) भनियो, जुन एसपीएलमा माइक रिड्लले विकास गरेको हो जसले मूलधारमा चलाउने पहिलो व्यक्ति हो र मारिनचिम called 16०० भन्ने कम्प्युटरमा दौड्यो (अरूले केवल मुख्य फ्रेम वा माइक्रो कम्प्युटरमा गरे)। AutoDesk का १ co सह-संस्थापकहरूले यसलाई किन्छन् र यसलाई C र PL / १ भाषामा पुन: लेख्छन् जुन पीसीको लागि एक CAD सफ्टवेयर प्रमोट गर्ने इरादाको साथ लगभग $ १,००० अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
यो पीसी मा दौडने को लागि पहिलो सीएडी प्रोग्राम मध्ये एक थियो।
उहाँले विगतमा दशक CATIA, विशेष यांत्रिक डिजाइनमा नेताहरूले रूपमा रहने भन्ने मिति देखि 1977 र 1971 Unigraphics मा देखा जो बचे। इन्टरग्राफ द्वारा आईजीडीएस सम्पादक
जबकि इन्टरग्राफ कम्पनी हो जसले उच्च प्रविधिको विकास गर्यो 1969 बाटउहाँको सिस्टम एक सम्पादक पारस्परिक ग्राफिक्स डिजाइन प्रणाली (IGDS) को लागि सस्ती स्वरूप थियो सुपर minicomputers एक CAD प्रणाली को 1980 VAX.Antes 125,000 एमबी डिस्क भन्दा स्मृति र कम संग अमेरिकी $ 512, 300 Kb खर्च।
पीसीको आगमन संग, 64k RAM को साथ एक आईबीएम अमेरिकी डलर 5,000 लागत।
1981 स्वतः सीएड 1.2 संस्करण
यसले अतिरिक्त भुक्तानीको साथ साइजिंगको लागि एक थप प्लस समावेश गर्यो।
1982 स्वतः सीएड 1.3 संस्करण
यस वर्ष अटोक्याड एक पीसी मा चल्छ भनेर पहिलो CAD कार्यक्रम रूपमा COMDEX मा प्रस्तुत छ, त्यसैले यसलाई हुनत यो 80.El मेनु सम्म बिक्री को लागि उपलब्ध छ, पीसी 86 भनिएको बताइरहेका, अटोक्याड 8086 र अटोक्याड 1983 भनिन्थ्यो यो 40 भन्दा बढी समर्थन वस्तुहरूकर्सर पहिलो पटक देखा पर्दछ, प्लटर प्रिन्टि basicका लागि आधारभूत प्यारामिटरहरू सिर्जना गरियो। नम्बर र colorsमा मानकीकृत छन्।
यस वर्ष CADPlan जन्म भएको थियो, जसलाई पछि CADVANCE पनि भनिन्छ। यस वर्ष CATIA I लाई पनि सुरू गर्यो।
II डस समय AutoCAD निम्न4वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रियकरण रणनीति सिर्जना गर्दछ, 50,000 प्रयोगकर्ताहरूलाई पुग्छ र उत्तम CAD कार्यक्रम भनिन्छ।
यसैबीच, Microstation जस्तै अवस्थित तर Intergraph कार्यक्रम प्रयोग बिना एक पीसी देखि IGDS ढाँचाको एउटा सम्पादक भइन् Pseudostation थियो थिएन।
1983 स्वतः सीएड 1.4 संस्करण
यस वर्ष सम्म ओटोक्याड 1.2, 1.3 र 1.4 संस्करणहरू जारी गरिएका छन्
जर्मन भाषामा AutoCAD को पहिलो संस्करण। यो १,1,400०० डलर थियो, प्रतिस्पर्धा वर्साकैड थियो जुन १ 1980 since० देखि यता थियो।
जस्तै जस्तै आदेश गर्न थप सुविधाहरू जुम, चाप, सरणी। राज्यहरू उठ्छन् ओर्थो, ग्रिड, स्न्याप। नयाँ ब्लकहरू र आदेशहरू यस रूपमा देखा पर्दछ अक्ष, एकाइहरू, ह्याच, ब्रेक, फिलेट. यस वर्षमा उत्पादन मोडेल डाटा स्टेट एक्सचेंजको लागि मानक देखिन्छ।
1984 स्वतः सीएड 2.0 संस्करण
यो वर्ष पहिलो ओटोडिस्क प्रशिक्षण केन्द्र देखिन्छ।
नयाँ आदेशहरू: दर्पण, ओएसनाप, नाम हेराइहरूर isometric क्षमताओं।यस वर्षको लागि, CATIA एरोवटिकल इन्जिनियरिङमा एक नेता थियो। PseudoStation
एक इमुलेटर को लागी इन्टरग्राफ सफ्टवेयर प्रयोग नगरी व्यक्तिगत कम्प्युटरमा IGDS ढाँचा पढ्न प्रणाली हुन सक्दछ। यस वर्ष कीथ बेंटले बेंटली प्रणाली फेला पारे।
1985 स्वतः सीएड 2.1 संस्करण
ओटोडिस्कले पहिलो CADCamp लाई बढाउँछ, यस वर्ष बिक्री US $ 27 मिलियन सम्म पुग्छ। पहिलो 3D क्षमताहरू देखा पर्छन्।
नयाँ आदेशहरू: chamfer.
यस वर्ष MiniCAD, म्याक वातावरणमा ठूलो प्रसारको कार्यक्रम हो।
1986 स्वतः सीएड 2.5 संस्करण
यो संस्करणले यसलाई धेरै लोकप्रिय बनायो, अधिक सम्पादन आदेशहरू देखा पर्दछ: विभाजित, विस्फोट, विस्तार, माप, अफसेट, घुमाउनुहोस्, स्केल, खैरो, ट्रिम।
AutoLisp अधिक सम्पत्तीको साथ आउँछ। AutoDesk ले worldwide०,००० लाइसेन्स विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त गर्दछ। यस बर्षदेखि, र १० बर्षको लागि AutoCAD पीसी वर्ल्ड पत्रिकामा सर्वश्रेष्ठ CAD प्रोग्रामको रूपमा जीत गर्छ।
म्याक संसारमा यो वर्ष डेन्बाले देखाएको छ कि म्याकल्याइटिङसँग क्यानवास हुनेछ। माइक्रोस्टेशन 1.0
यो माइक्रोस्टेशनको पहिलो संस्करण हो जुन व्यक्तिगत कम्प्यूटरमा सञ्चालन गर्न सक्दछ, अब यसले IGDS ढाँचा सम्पादन गर्यो। आईबीएम एक्सएनमक्स पीसीको समय तिनीहरू थिए।
III 32 बिट्सको इन्सेन्सन
यस समयमा, AutoDesk जेनेरिक CADD प्रयोगकर्ताहरू खरीद गरेर एक मिलियन प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्छ। उसले सफ्टडेस्क पनि खरीद गर्दछ र यो ड्राफ्टिक्स जुन उसले अटोस्केचको रूपमा सुरू गर्‍यो। माइक्रोस्टेशन परिपक्व हुन्छ र १०,००० प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्छ।
स्वत: सीडीएड र माइक्रोस्टेशन दुवै गुणकलाकार संस्करणहरूमा अवस्थित छ।
1987 स्वतः सीएड 2.6 संस्करण
सुधारिएको मुद्रण र 3D, यो अन्तिम संस्करण थियो जुन गणित सह प्रोसेसर बिना काम गरे। स्वत: डिजाइनले ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोगहरू (SoftDesk) सँग पहिलो गठबन्धन बनाउँछ।AutoCAD रिलीज 9.0
धेरैले यसलाई AutoCAD3भनिन्छ, थ्रीडी अनुहारहरू देखा पर्दछन्। बटनहरू, संवाद बक्सहरू, मेनू बार।
प्रतियोगिता: MiniCAD र आर्किटोनन (म्याक)
CADVANCE Windows को लागि पहिलो CAD कार्यक्रम हुन्छ।
यो पहिलो संस्करण हो जुन dgn ढाँचा पढ्न र सम्पादन गर्न सक्छ जुन आईएनडीडीएस संस्करणमा बेंली स्टेटिस्टमको विस्तार भएको थियो।
1988 AutoCAD रिलीज 10.0
AutoCAD सँग २ 290,000 ०,००० प्रयोगकर्ताहरू र GenericCADD खरीदहरू थियो जसमा 850,000०,००० प्रयोगकर्ताहरू थिए। यसका साथ उनले आफ्नो अभियान सुरू गर्न सफल भए "हामीसँग 1 प्रयोगकर्ता भन्दा बढी छ" माइक्रोस्टेशन 3.0
1989 यस वर्ष STEP मानकको एक नयाँ संस्करण, अनग्राफिक्स को हात मा हात हाले, जो खुला स्रोत प्लेटफार्महरु को समर्थन को लागि प्रेरित गरियो।यस बर्ष पनि, AceCAD सुरू भयो, संरचनात्मक डिजाइनका लागि पहिलो CAD सफ्टवेयर। पछि T-Flex, पछि ACIS भनिन्छ, प्यारामिट्रिक डिजाइन अवधारणाको लागि पहिलो प्रोग्राम र प्रो / ENGINEER को पहिलो संस्करण आउँछ।
यो वर्ष ग्राफियसफ्ट आउँछ, जुन पछि ArchiCAD लाई समर्थन गर्दछ।
माइक्रोकैड उभिए, जुन जापानमा सबैभन्दा ठूलो सीएडी कार्यक्रम हुनेछ।
AutoDesk खरिदहरू AutoSketch SoftDesk बाट।
माइक्रोस्टेशन म्याक 3.5
पहिलो संस्करण म्याकको लागि माइक्रोस्टेशन.
1990 AutoCAD रिलीज 11.0
पीसी को लागि ओटोसीड र Mac को लागि AutoCAD, कागज ठाउँ र लेआउटको अवधारणा देखा पर्दछ। एसीआईएसको साथ थ्रीडी सुधार गर्नुहोस्, तर थप भुक्तान अन्तर्गत। आइकनहरू प्रस्तुत हुन्छन्, बटनको उपस्थितिमा, सँधै DOS मा।
स्वतः सीएडी सर्भरमा चलाउन सकिएन।
यस समयमा, ओटोडिसेक AutoDesk Animator स्टुडियोको साथ एनीमेशनको मध्यमा पुग्न कोसिस गर्दछ।
यस वर्षको लागि, इन्टरग्राफ संयुक्त राज्यमा दोस्रो र दोस्रो संसारमा दोस्रो दोस्रो CAD / CAM / CAE सफ्टवेयर प्रदायक हो।
AutoDesk AutoCAD को 500,000 प्रतिलिपिहरूको साथ नेता थियो; 300,000 बाट Generic CADD र 200,000 बाट AutoSketch।
यो वर्ष र 8 पछि, AutoCAD बाइट पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ सीएडी कार्यक्रम को योग्यता जीता। UNIX को लागि माइक्रोस्टेशन 3.5
1991 आर्किकेडको साथ आर्किटेक्चर वातावरणमा प्रवेश गर्न AutoDesk को पहिलो प्रयास। साथै SUN प्लेटफार्मको लागि पहिलो AutoCAD पहल। यस वर्ष माइक्रोसफ्टले ओपनजीएल विकसित गर्‍यो, जुन थ्रीडी डाटा डिस्प्लेको मापदण्ड भयो।
म्याक वातावरणमा, क्यानभास एप्पलको सिस्टम7अनुकूलतासँग लोकप्रिय छ।
माइक्रोस्टेशन V4 (4.0)
माइक्रोस्टेशनले धेरै प्रकार्यहरू कार्यान्वयन गर्दछ जुन यसलाई छुट्ट्याउँछ: फेन्स, सन्दर्भ, सन्दर्भ क्लिपिंग, स्तर नाम, dwg अनुवादक। यसले एसोसिएटिभ डाइमेन्शि,, सेयर सेलहरू, सतहहरू र रेन्डरि included समावेश गर्दछ। नेक्सस भनिने संस्करणमा dwg ट्रान्सलेटर र विन्डोज 3.1..१ चलाउने क्षमता समावेश छ।
MDL भाषाको साथ पहिलो संस्करण।
बेंटले घोषणा गरेको छ कि माइक्रोस्टेशन प्रयोगकर्ताहरू 100,00 पुगिसकेका छन्।
IV विन्डोज एपिलेशन
निम्न4वर्षले विन्डोजको वृद्धिलाई चिह्न लगाइयो, अटोडेस्कले पीसीमा ध्यान दिए र लिनक्सलाई 1994 मा छोड्यो।
स्वत: डिजाइनले निर्माण र वास्तुकला बजारमा प्रवेश गर्छ।
माइक्रोस्टेशन २००,००० प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्छ र इन्टरग्राफबाट अलग हुन्छ। AutoCAD 200,000 लाख प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्दछ।
1992 AutoCAD रिलीज 12.0
The बाह्य सन्दर्भहरू,आइकनहरू बढाइयो, रेन्डरिंग देखा पर्दछ र SQL बेसहरूसँग कनेक्ट हुन एक विस्तार। AutoDesk DOS को लागी 3D स्टुडियो २ रिलिज गर्दछ। यो छ म्याकका लागि नवीनतम स्थिर संस्करण.
Comdex विन्डोजको लागि क्यानभास सुरुवात गर्दछ.
1993 AutoCAD रिलीज 13.0
DOS र विन्डोज 3.1 संस्करणहरूमा, 3D ACIS मोडलर एकीकृत। यो थियो UNIX को लागि नवीनतम संस्करण.
ओटोडिस्कले माइक्रोइन्जाइनिङ समाधान, ओटोसर्फको सिर्जनाकर्ता प्राप्त गर्दछ।
यस वर्ष सोलिड वर्र्क इंक स्थापना गरिएको छ
16 कम्पनीहरु इन्टरनेटका लागि ढाँचाको रूपमा डिजाइन गरिएको सरल वेक्टर स्वरूप (एसवीएफ) को प्रचार गर्दछ।
माइक्रोस्टेशन V5 (5.0)
Microstation बाइनरी ढाँचा, अनुकूलन लाइन शैलियां, अवरोध र centroid गणना मा हैंडलिंग समायोजन गर्दछ। वास्तविक फोटो प्रतिपादन उडान मा पेश गरिएको छ। यो natively Windows NT मा भाग्यो।
यो अन्तिम संस्करण थियो जसमा ब्रान्डस्टेशन इन्टरग्राफद्वारा निर्मित ब्रान्ड र उपकरण अन्तर्गत लगाइएको थियो।
1994 ओटोसीड R13c42b
विन्डोज 95 र DOS को लागि, विन्डोजमा चलिरहेको अन्य प्रोग्रामहरू जस्तै एक इन्टरफेसको साथ। Autodesk म्याकको लागि संस्करणहरू रिलीज गर्न निर्णय गर्दैन.
ओटोडिस्क स्वत: वास्तुकार र सफ्टडिसेक प्राप्त गर्न प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गर्दछ जुन ओटो सीएडीको क्लोनमा भाग्यो।
स्वत: सीएडीले एक लाख प्रयोगकर्तालाई मात्र सफ्टवेयरको रूपमा प्राप्त गर्दछ, पछि 180,000 र बेन्टले 155,000 सँग केडीई।
कैनवासले Win100 अवार्डबाट विन्डोज म्यागजिनबाट प्राप्त गर्दछ। बेन्टलेसँग 155,000 प्रयोगकर्ताहरू थिए।
1995 AutoDesk, AutoSurf मार्फत, IGES मानकमा रूपान्तरण समावेश गर्दछ। यसले AutoDesk Designer मा प्यारामिट्रिक मोडेलि includes पनि समावेश गर्दछ।
GIS संसारमा प्रवेश गर्न स्वचालित तरिकाहरू किन्नुहोस्। AutoDesk ले घोषणा गरेको छ कि यसको तीन लाख प्रतिमाहरू बेचेको छ र संसारमा पाँचौं ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी हुन्छ।
यो साल मेडुसा, कम्प्यूटर भिजनको हातमा DOS र UNIX को लागी आउँछ।
प्रो / Engeneer पहिलो CAD कार्यक्रम Parametric मोडेलिंग क्षमताहरु र उच्च संकल्प 3D Windows NT उपयुक्त छ र यो वर्ष यांत्रिक डिजाइनमा नम्बर 1 रूपमा मान्यता छ।
माइक्रोस्टेशन 95 (5.5)
MicroStation windows5.5 को युग मा 32 बिट मा पहिलो काम, 95 संस्करण शुरूआत, उपकरण AccuDraw (खिच्छ), संवाद Windows, पप-उपकरण, ब्राउजर प्रमुख-मा, धेरै फाइलहरू, SmartLines चलिरहेको, स्वतन्त्र दृष्टिकोण शुरू छन् , एनिमेशन को पीढी (फिलिमहरु)।
आधारभूत प्रोग्रामिंग, ODBC समर्थन र ACIS मा आधारित आर्किटेक्चरका लागि माइक्रोस्टेशन मोडलरको पहिलो संस्करण समावेश छ।
बेंटलेले 200,000 प्रयोगकर्ताहरू घोषणा गरे।
V ठाडो रेखाहरू
Years बर्षको लागि AutoDesk र ​​Bentley 3२-बिट ढाँचाको साथ अझै पनि साधारण CAD पछाडि ठाडो लाइनहरूमा प्राथमिकता कायम राख्न खोज्छ। AutoCAD लाई अब सर्वश्रेष्ठ CAD प्रोग्राम भनिन, यसले वास्तुकला, इन्जिनियरि Engineering र मेकानिक्समा स्थिर लाइनहरू कायम गर्दछ।
बेंटले आर्क आर्किटेक्चर र प्लान्टहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रवेश गर्दछ, 1997 मा म्याक र युनिक्स छोड्छ।
स्वत: डिजाइनले म्यानुअल डेस्कटप 1.1 सुरू गर्दछ।
कैनवास र टर्बोक्याडी MAC र विन्डोजका लागि अवस्थित छ।
यस वर्ष DataCAD प्रकट हुन्छ, FelixCAD AutoCAD सँग मिल्दो छ।
प्रो / ई इन्टरनेटको लागि VRML ढाँचा सुरू गर्दछ।
बेंटले वास्तुकला र औद्योगिक प्लान्टको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन्। यो जिओइन्जिनियरिंग लाइनमा पहिचान भयो र पहिलो पटक सेलेक्ट सदस्यता प्रणाली सुरू गर्दछ जुन १ 1990 XNUMX ० देखि सीएसपीको रूपमा अवस्थित छ।
1997 AutoCAD रिलीज 14.0
विन्डोज एनटी र For For को लागि। AutoDesk ले DWF ढाँचा इन्टरनेटमा प्रयोगको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
यस मिति सम्म 14 विभिन्न संस्करणहरू उत्पादन गरिएको छ, प्रत्येक वर्ष एक।
DOS संस्करण गायब।
यो GenericCAD discontinues र अटोक्याड LT कि लागत $ 500 तपाईं मात्र Autodesk को वितरक गर्दा पूर्ण संस्करण कुनै पनि कम्प्युटर पसलमा किन्न सक्ने सुझाव छ।
DataCAD र MiniCAD, एक पूर्ण संस्करण को लागत $ 4,000। प्रो / म यसको सबै २ mod मोड्युलहरू र i० मोड्युलहरूको लागि यूनिग्राफिक्स १,26,000,००० सहित २,26,००० खर्च गर्दछ।
SoftDesk AutoDesk को खरीद संग ईन्जिनियरिङ् को लागी ऊर्ध्वाधर संस्करण को शुरुवात शुरू हुन्छ।
यो वर्ष MarComp पहल dwg प्रारूप प्रजातन्त्र गर्न को लागी शुरू हुन्छ। पहल समाप्त हुन्छ जब माइक्रोसफ्ट भिजियो प्रोग्राम प्राप्त गर्दछ जुन AutoCAD को क्लोन थियो।
क्यानभास सिनेमामा एनिमेसनको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको सफ्टवेयर हो। यस वर्ष उनी सोलिडवर्क्स सुरू गर्ने कम्पनीको हिस्सा बन्न पुगे। माइक्रोस्टेशन SE (5.7)
MicroStation 5.7 बटन प्रतीक रंग र Office2007 शैली शक्ति स्विच गर्न किनाराको को उपस्थिति विशेष संस्करण संस्करण रूपमा चिनिने शुरूआत शुरू छ, engeneering लिंक, OLE लिंक र केही functionalities इन्टरनेटमा काम गर्नुहोस्.
बेंटले मोडेल सर्भरसँग काम गर्न थाल्छ। Daratech सीएडी / सीएएम / सीएई उद्योगमा सब भन्दा छिटो बढ्ने कम्पनीहरूको सूचीमा छ। नवीनतम संस्करण म्याक र लिनक्ससँग मिल्दो छ.
1998 यस वर्ष ओपनडेडब्ल्यूजी एलायंसले MarComp द्वारा बायाँका पुस्तकालयहरूबाट जन्मेको थियो। ओटोडेसको अटोकएड एक्सएनमक्सको आधारमा अर्कैटिक डेस्कटपको सुरुवात भयो।
यस साल IntelliCAD को पहिलो संस्करण भिषाको प्रयासबाट आउछ।
VI 64 बिट आइपुग्छ
अर्को years बर्षमा, AutoDesk र ​​Bentley आफ्नो विशेष प्रयोगकर्ताहरु लाई बढाउन र नयाँ टेक्नोलोजी को खरीद को माध्यम बाट आफ्नो कार्यक्षमता मा सुधार राख्नुभयो। अटोडेस्कले एक बर्ष भन्दा बढि dwg ढाँचा कायम गर्न सुरू गर्‍यो, यसका केही साझेदारहरू जस्तै ईगल पोइन्टले यसलाई एईसी मार्केटमा पार गर्यो। माइक्रोस्टेशनले V9 सुरूवात गर्दछ र रूपान्तरण बिना ढाँचा पढेर dwg उपयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न खोज्छ।
1999 ओटोक्याड 2000 (R15)
विन्डोज 95,, NT, २००० को लागि। कागजात स्थान को परिचय को साथ अधिक सहज हुन्छ बहु लेआउट, र किबोर्ड घटाउन खोज्ने दाँया बटनको प्रयोगको साथ उत्पादनकतामा सुधार गर्दछ।
DWG ढाँचा 2000 पहिलो पटक बिना 2000D वा Autolisp अटोक्याड र अटोक्याड 2002.AutoCAD 200i 3LT लागि थप एक वर्ष भन्दा रह्यो।
ओटोडिसेकद्वारा खरिद गरिएको GenericCADD बाट क्लोनको रूपमा आर्किटेक्चरल एड-अन प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
माइक्रोस्टेशन जे (7.0)
जाभालाई विकास भाषामा एकीकृत गरिएको छ, यसलाई JMDL भनिन्छ, जुन संस्करण in मा छोडियो, क्विकभिसन जीएलका लागि समर्थन गर्दछ। को ठोस मोडलिंग। मोडेल सर्भरबाट समकालीन लाइसेन्स।
माइक्रोस्टेशन जे (7.1)
हिज्जे परीक्षक, विन्डोज 2000 को लागि समर्थन। ProjectBank सुरू गर्नुहोस्, जुन पछि प्रोजेक्ट बुद्धिमानी हुनेछ।
Dgn V7 भनिने फाईलहरूको यो संस्करण आईडीजीएसमा आधारित अन्तिम थियो, V8 IEEE-754 मा आधारित थियो।
यस वर्ष अपसाइड म्यागजिनले बन्टलेलाई १ 1998 100 ranking को १०० तातो कम्पनीको रैंकिंगमा नाम दियो। बेंटलेले ,300,000००,००० प्रयोगकर्ताहरू र २,००,००० SELECT मा विज्ञापन गर्दछ।
2000 ओटोक्याड 2000I (R15.1)
AutoDesk functionalities को एकीकृत गर्दछ इन्टरनेटको लागि। पहिलो पटक तपाईं AutoCAD अनलाइन पसलमा 15% को छूटको साथ अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस वर्ष, ओटोकएड 2000I एलटी IntelliCAD सँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाहिर आयो।
ईगल पोइन्ट AEC मा एक नेता थियो। Alibre अधिक सहयोगी बलको साथ प्रवेश गर्दछ। ग्राफिसोफ्टले ड्र्याबेस प्राप्त गर्दछ। टर्बोकेड एक मिलियन प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्छ।
2001 ओटोक्याड 2002 (R15.6)
ड्र्याग एण्ड ड्रप, तहहरूको समूह बचत। अनलाइन मद्दत प्रकार्यहरू एकीकृत छन्।
AutoCAD 2002i ($ 135) सँग IntelliCAD सँग प्रतिस्पर्धा गर्न। माइक्रोस्टेशन V8 (8.0)
नयाँ-8-बिट आधारित V64 ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ, यसले dwg / dxf मूल रूपमा, ऐतिहासिक फाइल, accusnap पढ्छ र सम्पादन गर्दछ। स्तरमा (प्रतिहरू) प्रतिबन्धहरू, अन्डु र फाइलहरूको आकार।
पहिलो पटक लेआउट व्यवस्थापन पाना मोडेल परिचय गर्दा। श्री एसआईडीको लागि समर्थन।
VBA प्रोग्रामिंग एकीकृत छ र .NET संग interoperability अनुकूलित छ।
अन्य सुधारहरू V8 ढाँचाबाट लिइन्छ जस्तै कार्य इकाईहरूको मानकीकरण, सही मापन।
2002 यस वर्ष ओटोडिसेकले कम्पनीहरू खरीद गरेका छन् जसले BIM एकीकरणको लागि रिभिट र आविष्कारकका लागि प्रविधिहरू विकास गर्यो।
2003 ओटोक्याड 2004 (R16)
एक्सप्रेस उपकरणहरू एकीकृत हुन्छन् (पहिले तिनीहरू सफ्टवेयरमा)। गुण तालिका बढि अनुकूल अनुकूल इन्टरफेसको साथ सुधारिएको छ।
AutoCAD 2004 को DWG ढाँचा स्वत: सीएडीएनएनएमएक्स र ओटोकैड एक्सएनमक्समा जारी राख्यो।
यस वर्षको रूपमा, ओटोडिसेकले मार्चको महिनामा AutoCAD को सबै नयाँ संस्करणहरू रिलीज गर्दछ। माइक्रोस्टेशन V8.1
डिजिटल हस्ताक्षरको, र फाइल सुरक्षा सम्बद्धता नाम वस्तुहरु को OpenDGN समर्थन र CAD फाइलहरू को सरल व्याख्या परे विस्तार गरिएका groups.Este वर्ष OpenDWG गठबंधन खुला डिजाइन गठबंधन परिवर्तनहरू प्रयोग र बेन्टले अनुसार समावेश गरिएको छ।
2004 ओटोक्याड 2005 (R16.1)
CADstantard देखा पर्छ, dwg कम तौल। धेरै कमाण्डहरू कमान्ड लाइनबाट विन्डोजमा सर्छन् र रूपरेखाका ह्यान्डलिंगलाई थप सुधार गर्दछ। माइक्रोस्टेशन V8 2004 संस्करण (8.5)
DWG २००-2004-२००2006, CADstandard नयाँ ढाँचाहरूको लागि समर्थन अपडेट भयो र यसले बहु-स्नैपहरू २ र थ्रीडीमा PDF फाईलहरूको सिर्जनालाई लागू गर्दछ। XFM लाई मोडलमा आधारित विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, यो अन्तिम संस्करण हो माइक्रोस्टेशन जियोग्राफिक्स द्वारा, XM बाट XFM को आधारमा बेंटले नक्शा भनिन्थ्यो। यस संस्करणमा, U2D र ADT को साथ अन्तर्क्रियात्मकता सुरु हुन्छ जुन पछि यसलाई AutoDesk संग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ र एडोब
बेन्टले Haestad तरिका खरिद र सबै पाइपलाइन प्रणाली नयाँ लाइन V8 supersedes।
2005 ओटोक्याड 2006 (आर 16.2)
गतिशील ब्लक र तालिकाहरू देखा पर्दछ। यसले पप-अप विन्डो बिना थर डायमेन्शिंग र ह्यान्डल गर्ने तहहरूको थकावटलाई सुधार गर्दछ। गुण ट्याबहरूको ह्यान्डलिंग सुधार गरिएको छ र DWF संशोधनलाई समर्थन गर्दछ।
ओटोडिस्कले माया र स्केचबुक खरीद गर्छ।
2006 ओटोक्याड 2007 (R17)
नयाँ अनुहार 3D दृश्य लिनुहोस्, यसको अर्थ बनावट बनावट, प्रतिपादन, एनिमेटेड डिस्प्ले र इन्फेसको केहि।
3D डिजाइन आदिम वस्तुहरु देखि अवधारणा र अवधारणा को 3D मोडेल। 2007 DWG ढाँचा ओटोक्याड 2008 र ओटोक्याड 2009 मा जारी राख्यो। माइक्रोस्टेशन V8 XM संस्करण (8.9)
यो .NET पूर्वाधारमा विकसित भयो। एकीकृत पीडीएफ बाह्य सन्दर्भ, पारदर्शिताहरू समर्थन गर्दछ, तत्व टेम्प्लेट, प्यान्टोन र रङ रंग व्यवस्थापन।
पार्श्व कार्य नेभिगेटर एकीकृत छ।
एक्सएम एक अंतरिम विकासको रूपमा जारी गरिएको थियो, केवल V8 लाई पुनर्निर्माण गर्न आशा गर्दै डायरेक्ट-एक्स-आधारित ग्राफिक्स सबसिस्टम प्रतिस्थापनबाट फाइदाको साथ। विन्डोज भिस्टाको लागि समर्थन र DWG 2007-2008 का लागि समर्थन।
2007 ओटोक्याड 2008 (आर 17.1)
64 बिट्सको साथमा ओटोसीडको पहिलो संस्करण।
अन्य "no cad" कार्यक्रमहरूसँग सुधारिएको एकीकरण, साइजिंग र मुद्रणमा अधिक तातोपन। Bentley रक्सी र STAAD प्राप्त V8 को प्रक्षेपण को लागि संरचनात्मक डिजाइन लाइन को बदलन को लागि।
VII हालका पुस्ताहरू
पछिल्ला years बर्षले ब्यान्टलेसँग वास्तुकला, इन्जिनियरि, र एनिमेशनको लाइनमा अटोडेस्क अन्तःक्रियात्मकता सम्झौताको परिणामहरू देखाउँदछ। दुबै भू-स्थल समर्थन र बिम मोडलि withको साथ उनीहरूको प्रवृत्तिलाई मानकीकरण गर्न खोज्छन्। बेंटले XFM मा आधारित, केवल औद्योगिक प्लान्टहरुमा venturing, गतिशील वस्तुहरु संग AutoDesk र ​​निर्माण को लागी र सिनेमा को लागी एनिमेसन।
2008 स्वतः सीएड 2009
रिबनको परिचयको साथ इन्टरफेसको रातोपन।
पहिलो पटक AutoCAD ले dgn फाइल आयात गर्न सक्छ, तर यसलाई सम्पादन गर्न सक्दैन।
ViewCube र Action Recorder जस्ता डाटाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक विशेषताहरू थपिएका छन्।
यस वर्ष ओटोडिसेकले 25 नम्बरलाई विश्वभर 50 सबै अभिनय कम्पनीहरूमा नामकरण गरेको छ।
स्वत: डिजाइनले SoftImage प्राप्त गर्दछ। माइक्रोस्टेशन V8i (8.11)
थ्रीडी डिजाइन उपकरणहरू, गतिशील दृश्यहरू, वैश्विक समन्वय प्रणालीहरूको लागि समर्थन (पहिले केवल भौगोलिकहरू), DWG २०० for को लागि समर्थन। RealDWG को लागि समर्थन, GIS ढाँचासँग अन्तर्क्रियात्मकता Bentley नक्शा (shp, mif, mid, ट्याब) द्वारा मात्र समर्थित। सन्दर्भ pdf र shp (उनीहरूलाई रास्टरको रूपमा देखाइनु अघि) सँग कुराकानी गर्न समर्थन गर्नुहोस्। आई-मोडेलमा जानकारी प्रकाशित गर्न क्षमता।
यसले जीपीएसको साथ अन्तरक्रियाको लागि क्षमतालाई एकीकृत गर्दछ।
गतिशील दृश्यहरू र सहायक समन्वयहरू प्रति दृश्य एकीकृत हुन्छन्।
यो वर्ष Bentley र AutoDesk dgn र dwg ढाँचाहरूमा पुस्तकालयहरू आदान प्रदान गर्न सम्झौतालाई अधिक अन्तर्राष्ट्रियता संग।
2009 स्वतः सीएड 2010
को DWG ढाँचा 2010 2011 अटोक्याड र अटोक्याड 2012 मा रह्यो।
पैरामीटर डिजाइन, 3D ठोसहरु को जाल मोडेलिंग,7र 32 बिट्समा विन्डोज 64 को लागि समर्थन पेश गरिएको छ।
पीडीएफमा निर्यात गर्न समर्थन गर्नुहोस् र लेयर मान्यतासँग सन्दर्भलाई कल गर्नुहोस्।
यस वर्ष ओटोडिसेकले मोबाइल फोनमा उद्यम गर्न अब हामी AutoCAD WS लाई के भन्छौं जुन हामी रचनात्मक कम्पनी प्राप्त गर्दछौं। माइक्रोस्टेशन V8i श्रृंखला 1 चयन गर्नुहोस् पोइन्ट क्लाउडहरूको लागि समर्थन। DWG २०१० र FBX।
सुधारहरू अन्य ढाँचाहरूसँग अन्तरक्रियामा थपिएका छन्, को लागि समर्थन 3D मुद्रण.
बेन्टले यस वर्ष geotecnia.En लाइन बनाउन gINT खरिद बेन्टले सबैभन्दा सक्रिय कम्पनीहरु 500 पूर्वाधार विश्वव्यापी बीचमा समावेश गरिएको छ।
2010 स्वतः सीएड 2011
वस्तुहरूको पारदर्शिता, मोडलिंग र सतह विश्लेषण।
वस्तुहरू लुकाउनुहोस् / अलग गर्नुहोस्, समान वस्तुहरूको साथ सञ्चालन, को लागि समर्थन अंकहरु को बादल.म्याकको लागि ओटोकएड 2011
XCUMX मा छोडेर पछि म्याकमा स्वतः सीएडी फर्काउँछ। माइक्रोस्टेशन V8i श्रृंखला2चयन गर्नुहोस्
Bentley ले dgn ढाँचामा BIM को मानक को एक प्रस्ताव को रूप मा I-model को प्रस्तुति शुरू गर्छ।
को समर्थन बिन्दु बादल.
La खुला डिजाइन एलायंस Teigha SDK 1000 देशहरुमा १००० भन्दा बढी सदस्यहरु संग शुरू गर्दछ। यसमा Adobe, BricSys, Carlson, ESRI, GraphiSoft, IntelliCAD, Intergraph, VectorWorks, Oracle, Safe सफ्टवेयर, SolidWorks,
2011 स्वतः सीएड 2012
ग्रेटर एसोसिएटिविटी एर्रे र ग्रुपिंगमा वस्तुहरूको परिचय हुन्छ। डिजाइन कागजात, नक्कल सफाई।
कमांड लाइन सुझाव गरिएको खोजको साथ पुन: निर्देशित गरिएको छ। बेन्टले को म-मोडेल यसको सबै उत्पादनहरु संग र बाहिर रेखाहरू वास्तुकला र ईन्जिनियरिङ् Autodesk अन्तरक्रिया को तत्व रूपमा विद्यमान जो मध्य-2011 नयाँ विकासक्रम, सुरु गर्न योजना।
यो ग्राफ जुन पोस्ट पछि सुधार गरिएको छ शान हुरली AutoCAD ईतिहासको करीव २ 26 माइलस्टोनहरूको सारांश दिन्छ, जहाँ महत्वपूर्ण चरणहरू खडा हुन्छन्: व्यक्तिगत कम्प्युटरहरूको लागि काम अगाडि बढ्ने, जेनेरिक CAD प्रयोगकर्ताहरू एक मिलियनसम्म पुग्न खरीद गर्ने, विश्वव्यापी विस्तार गर्ने क्षमता, र सम्भावित टेक्नोलोजी हासिल गर्नका लागि नाक। यो जहिले पनि नेतृत्व लिन्छ, यद्यपि पूर्ण एकीकृत उत्पादनहरूको साथ होईन, तर माया, डब्ल्यूएस जस्ता नवीन र म्याक संसारमा यसको प्रख्यात।
अन्य चार्टले १ mile माइलस्टोनहरू वर्णन गर्दछ जुन बेंटले माथि वर्णन गरिएको १ and र १ mile माइलस्टोनहरू बीच चक्र भित्र रहेको पहिचान गर्दछ। सब भन्दा सकारात्मक निर्णयको रूपमा खडा गर्ने कार्यहरू मध्ये, यसको सम्पूर्ण प्रक्षेपमा केवल for ढाँचाहरूको प्रयोग (यो V13 सम्मb14 बिट्सको प्रयोगमा ढिला भएको देखिन्छ), यसको dwg / dxf ढाँचा र सरलता सम्पादन गर्ने क्षमता हो। तपाईंको सबै लाइनहरूलाई ढाँचामा मानक गर्न जुन बेंटले बाहिर कुराकानी गर्दछ। यो ईर्ष्यालु ग्राहक आधारको साथ लोकप्रियतामा पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि उच्च गति ध्यासको लागि विशेष गरी दीर्घकालीन स्थिर ढाँचाहरूको परिवर्तनबाट।
स्पष्ट रूपमा, यी कम्पनीहरूको लागि अर्को दुई बर्षको चुनौती बजारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, दुबै तिनीहरूको स्थितिको बारेमा स्पष्ट छन् र अवसरहरूको आधारमा उद्यमशीलताको योग्य उदाहरणहरू हुन्। टेक्नोलोजिकल बजारको भूमण्डलीकरणलाई चिनो लगाउने प्रवृत्तिका साथ, यसको चुनौतीहरू बीआईएम दृष्टिकोण अन्तर्गत अन्य व्यक्तिको उत्पादनहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न नवीनता प्राप्त गर्नमा छन्, जुन वातावरणमा ग्याजेटहरूको आक्रमणबाट आक्रान्त हुन्छ, वेबमा निर्भरता, उभरती प्रविधिहरूको पलटाव। जस्तै एप्पल र ध्वनि भिन्न बजार र ओपनसोर्सको कारणले भयो।
स्वतः सीएड 2012 AutoDesk Bentley Systems DGN DWG
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Blogsy, IPad बाट ब्लगहरूको लागि
अर्को पोस्ट वूप्रा, वास्तविक समयमा दर्शकहरूलाई निरीक्षण गर्नअर्को »
Ge जवाफ "Geofumadas: AutoCAD र माइक्रोस्टेशनको years० बर्ष"
लुइस मोरेल्स भन्छिन्:
राम्रो जानकारी, अगाडी जानुहोस्, हामी सधैँ हेर्दै छौं ..